Hay’adda UNHCR oo ka digtay dhibaato loo gaysto qaxootiga Soomaaliyeed ee Keyna – Radio Daljir
Diseembar 21, 2012 4:24 b 0
Bosaso, Dec 21 – Hay’adda QM ee qaxootiga caalamka UNHCR ayaa uga digtay dowladda Kenya go’aamo ay kasoo saartay? qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya, iyadoo lala xiriirinayo amaan xumida ku baahaysa qaybo ka mid ah dalka Kenya.
Warsaxaafadeed ay soo saartay UNHCR ayaa lagu muujiyay hay’adda sida ay uga xuntahay dhibaatooyinka amaan xumi ee dalka Kenya kusoo kordhaya mudooyinkan dambe, waxaana hay’addu ay tacsi ka dirtay dadkii ku dhintay qaraxyada Kenya kadhacay.
Hay’adda UNHCR ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saartay waxaa ay dowladda Kenya uga codsatay inay ka laabato go’aankeeda qaxootiga ku sugan magaalooyinka faraya inay ku laabtaan xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma.
Dowladda Kenya ayaa horay usaxiixday heshiisyada caalamiga ee dhowridda xuquuqda aadanaha, taasi oo sharci yaqaanada badankood qabaan inuu kahor istaagayo ku tumushada xuquuqda qaxootiga ee dalkeeda kusugan.